Nahoana Ny Olona Ety Anaty Aterineto No Miantso An’i John Kerry Ho “Jiolahimboto” ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2016 7:51 GMT
Al Shabeeh Kerry, na #KerryTheThug na #KerryJiolahimboto, no nialoha làlana ny kaonferansa Zeneva III natao ny 29 Janoary teo, izay nandrandraina hanavao ny resaka momba ny fandriampahalemana eo amin'ny fitondràna Siriana sy ireo vondrona mpanohitra samihafa. Ora vitsy taorian'ny nanombohan'ilay kaonferansa no nalefa ilay tenifototra, ary nampahatsiahy an'i Kerry ny fanambaràna nataony tany ampiandohan'ny Desambra, fony izy nilaza fa “Tsy mikatsaka ny lazaina fa fiovàm-pitondràna ao Siria izany i Etazonia sy ireo mpiaradia aminy”. Heverin'ireo mpandalina ho mety fiovàn'ny toerana noraisin'ny fitantànana amerikàna tany ampiandohana ilay fanambaràna, izay nangataka ny filoha Siriana Bashar Al Assad hiàla. Raha ny marina, ny filoha amerikàna mihitsy no nanao fanambaràna mifanohitra tany amin'ny fiafaràn'ilay kaonferansa famaranan-taona natao ho an'ny mpanao gazety, andro vitsy taorian'ireo fanambaràn'i Kerry, izay nilazàny hoe :
Ireo Siriana sy Arabo mpampiasa Twitter dia samy naneho fisalasalàna tamin'ny alàlan'ny sary mahatsikaiky sy tenifototra, toy ny hoe #KerryTheThug, nampitahàna an'i Kerry amin'ireo jiolajilmboto sy tsy mpivadi-belirano amin'ny fitondràna Siriana, fantatra amin'ny fiten-jatovo Siriana hoe Shabeeha. Ny hafa indray nilalao Photoshop namadika an'i Kerry ho Hassan Nasrallah, mpitarika ilay vondrona milisy Libaney Hezbollah, izay manana andiany eny an-kianja ao Siria manohana ny hetsika ataon'ny tafika Siriana.
Andro vitsy nialoha ilay kaonferansa, nambaran'ireo tatitra tanaty fampahalalana vaovao fa nanao tsindry tamin'ny mpanohitra i Kerry mba hiditra tsy misy fepetra amin'ireo fifampidinihana. Tany amboalohany ny mpanohitra, eo ambany fiahian'ilay Kaomity Ambony Miadidy ny Fifampidinihana, izay ahitàna ny sasany amin'ireo hery politika sy miaramila, dia nametraka mazava fa ho avy hiatrika ny fifampidinihana ry zareo raha toa ny mpisehatra rehetra manaiky fampitsaharana poabasy. Ny fepetra sasany napetrany mialoha, dia tonga hatramin'ny famelàna ny fanampiana ho any amin'ireo faritra tratry ny fahirano.
Tenifototra hafa ampiasain'ny olona ny #UNAssadAlly na hoe Mpiaradia amin'i Assad ny Firenena Mikambana, mba hanakianana ny Firenena Mikambana amin'ny tsy fahampian'ny hetsika mavitrika ataony manoloana ireo zavadoza manjo ny maha-olombelona ao Siria. Ny tsy nahavitan'ilay fikambanana nitàna ny toerana tsy mitanila tamin'ireo dingana politika, na hitazona ireo mpisehatra tafiditra amin'io ho tomponandraikitra, no niteraka kiana tety anaty aterineto sy teny an-kianja avy amin'ireo Siriana mpikatroky ny fiarahamonim-pirenena sivily, izay nampitovy ny andraikitry ny Firenena Mikambana tamin'ny fanampiana mahomby ho an'ny fitondràn'i Assad. Ny iraka manokan'ny Firenena Mikambana ao Siria, Staffan de Mistura, nanambàra fa hatsahatra ireo fifampidinihana hatramin'ny andro faran'ity volana ity. Ireo hery mpanohitra nanakiana ny tsy fahafahan'ny Firenena Mikambana nitàna andraikitra tsy miandany sy mavitrika mba farafaharatsiny hanakànana ny daroka baomba, amin'ny fampiharana ny fanambaràna faha-2254 ao aminy, izay miantso ny mpifanandrina rehetra hampitsahatra ny fanafihana atao amin'ny olontsotra.
Azo jerena ato ireo dikanteny mismisy kokoa avy amin'ireo bitsik'i Meedan